Mitondra ny ankizy sy ny fiaraha-miasa miaraka | Rehefa misy ny ankizy
Maka fotoana ary miezaha ho mpivady vaovao
Manaova fialam-boly sy namana!
Amin'ny voalohany dia mbola ao am-pitiavana ianao, ny zava-drehetra dia mandeha araka ny tokony ho izy. Fetiben'ny sinema, alakamisy maraina ary alahady maraina dia afaka matory ianao. Koa miray saina tanteraka, tsy misy mahasolo ny fomba fiasa ao amin'ny fianakaviana.
Mitondra ankizy sy fiaraha-miasa
Saingy tapitra ny fiafaràny: tsy ny fifandraisana tsy nahitana ny taona voalohany taorian'ny nahaterahan'ny zaza. Ny ankizy mitabataba, fifandonana, alina matory, izany rehetra izany dia mety kokoa amin'ny tanora kokoa noho ny olon-kafa izay miahiahy. Kanefa ny rehetra dia nilaza fa ny fotoana tsy dia misy ankizy dia iray amin'ireo tsara indrindra.
Fiaraha-miasa sy fianakaviana
Ny voalohany dia tsy maintsy mampiasa ny anjara asany vaovao
Ny zazakely dia midika hoe mandray andraikitra. Tsy zavatra ara-bola fotsiny no manelingelina ny fianakaviana tanora. Miaraka amin'ny zazakely koa dia manova ny anjara asanao amin'ny fifandraisana. Tampoka teo, tsy namana intsony ianao, mpivady na vady, fa reny na ray, ary manana andraikitra hafa koa ianao.
Raha mijanona ao an-trano ilay vehivavy, dia mila mikarakara ny vady aman-janany izao ny lehilahy. Lehilahy maro no nametraka izany fahalalana izany tamin'ny tsindry satria ny toeram-piasana dia tsy miharihary amin'izao andro iainana izao. Ny vehivavy kosa etsy ankilany, dia tokony hanapa-kevitra ny hanokana manontolo ny fikarakarana ny zanany na hiverina hiasa mandritra ny fotoana maromaro, ary hametraka azy mandritra ny fotoana maharitra ny zaza.
Raha manapa-kevitra ny ho any ho an'ny taranany izy, dia mamono ampahany amin'ny mombamomba azy teo aloha izy ary niaina toe-javatra iray vaovao tanteraka. Tsy mihaja foana ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao, na dia mahatsapa fifaliana amin'ny andraikiny ilay reny tanora aza. Ny zazakely mandritra ny alina dia mitomany noho ny colic na ny nify kely kely, ny adin-tsaina amin'ny mpifanolobodirindrina, ny tsy fahazoana antoka, raha manao ny zava-drehetra ianao, ary koa ny fiovan'ny hormone dia manome indray mandeha indray ny tany.
Ny tsy fahafalian'ny ray
Ny fiainan'ny andavanandrom-piainan'ny ray vaovao dia tsy miova toy ny an'ny reny. Na izany aza, rehefa tonga ao an-trano izy, dia matetika izy no miarahaba ny "tsara tarehy salama tsara, ahoana ny andronao!", Fa mety ho avy amin'ny vady masiaka izay tsara indrindra, tsy misy fanamarihana, nipetrahan'ilay zaza teny an-tsandriny.
Amin'ny ankapobeny, raha ny fijeriny, dia toa niova tanteraka ilay vehivavy izay nikarakara azy taloha. Matetika ny lehilahy no maneho fialonana amin'ny taranany. Hanomboka aloha ilay zaza - ary izany dia mandra-pandosiran'ny ankizy.
Amin'ny voalohany dia tsy maintsy mampiasa azy ireo ray tanora. Eto dia mila faharetana, herimpo ary fandeferana tsara, mba tsy hahomby ny fanambadiana. Vitsy ny mpivady manana zanaka matory mandritra ny telo herinandro!
Rehefa afaka kelikely, dia matetika no mahatsapa ny tenany amin'ny andraikitra vaovao ny olona iray ary manaiky fa ny mpivady dia tsy maintsy manitsy ny tenany ihany koa. Noho izany, ny reny tanora rehetra sy ny raim-pianakaviana dia tokony hikarakara tsy tapaka - ary tsara indrindra hatramin'ny voalohany. Azo antoka fa misy ray aman-drenibe mandray ny andraikitry ny zazakely indray mandeha isam-bolana, tsara kokoa na indroa aza. Raha tsy miaina eny an-toerana izy ireo, dia afaka mihaino amin'ny faritry ny olom-pantatra ianao. Azo antoka fa misy olona mahafantatra zazakely mendri-pitokisana izay tsy lafo.
Na mifankatia ny fianakaviana tanora. Angamba misy olona avy amin'ny manodidina koa dia manolotra hikarakara ilay zazakely. Mitadiava fanampiana eto! Ny tombontsoa iombonana eo amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fotoana maharitra.
Amin'ny fiaraha-miasa, ny tsirairay dia tokony hanana fotoana hanaovana ny fialam-boly ataony, na dia eo aza ny taranany. Eto, ireo mpiara-miombon'antoka dia tsy maintsy miara-mivory, satria raha manaraka ny fialam-boly ianao, dia manamaivana ny vatana ny vatanao ary afaka mamerina ny pilinao. Toy izany koa ny faritry ny namana. Matetika ny mpinamana no mijaly noho ny fotoana ifaneraseran'ny ray aman-dreny, indrindra raha mbola tsy nanan-janaka ireo namany ary tsy azony raha reraka loatra ny hariva rehefa miresaka ela.
Ankizy sy fiaraha-miasa
Eto koa: Fandaharam-potoana voafaritra. A: "Afaka mahita indray isika indray mandeha indray" dia manampy olona tsy misy. Indrindra fa ny fihaonana amin'ny namana sy ny fambolena fialamboly dia matetika fohy, eto dia hahita ny ampahany amin'ny mombamomba azy ianao. Ny ankabeazan'ny fianakaviana tanora dia toy izany koa, ankoatra ny fiainana andavanandro, izay mazava ho azy fa manana fotoana tsy hay hadinoina koa mba hanomezana ireo nosy hamorona sy hamerenana ny batteries eto.
Ny torohevitry ny fanambadiana dia ampiasaina
Raha toa ka tsy manampy na tsy ampy ny fotoana rehetra dia afaka mahatsapa ihany koa ny hahazoana fanampiana avy amin'ny matihanina. Ny mpitsabo sivika matetika dia manome torohevitra amin'ny fanambadiana izay manambara haingana ny antony, ilay olana fototra. Mazava ho azy, ny mpivady dia tsy maintsy miasa amin'izany. Fa raha ny fifandraisany dia mendrika ny zavatra, tsy tokony hanafina sy hanala ireo mpiblaoka amin'ny fiainana andavanandro izy ireo. Satria, mazava ho azy, tsy ny zanaka no manome tsiny ny olana, fa ny fahafahan'ny ray aman-dreny hiatrika ny adin-tsaina.
Fanampim-panafihana ampiana | fiaraha-miasa
Romantic weekend | Fiaraha-miasa eo amin'ny fiaraha-miasa
Fifandraisan'ny samy lahy na samy vavy | Fiaraha-miasa
Miara-misakafo miaraka amin'ny namana | Fiaraha-miasa erotic